Inoculant Factory, mpamatsy - mpanamboatra Inoculant China
Carburizer, fantatra koa amin'ny anarana hoe carburizing agents na carburant, dia manampy amin'ny fanaovana vy na casting mba hampitomboana ny atin'ny gazy karbonika. Ny carburizers dia ampiasaina amin'ny fanadiovana Carburizers vy sy Carburizers vy, ary koa additives hafa amin'ny Carburizers, toy ny additives pad pad, toy ny frera materia
Ny inoculant silikon bariro dia karazana firaka mifototra amin'ny FeSi misy barium sy kalsioma sasany, afaka mampihena be ny fihenan'ny hatsiaka, mamokatra kely sisa tavela. Noho izany, Feroc silicon barium inoculant dia mandaitra kokoa noho ny inoculant izay misy calcium ihany, amin'ny doka
Nodulizer dia fiankinan-doha iray izay afaka mampiroborobo ny famolavolana grafita spheroidal avy amin'ny sary grafita amin'ny fizotry ny famokarana. Izy io dia afaka mampiroborobo ny grafita spheroidal ary mampitombo ny isan'ny grafofa spheroidal ka hihatsara ny toetra mekanika. Vokatr'izany, ny fikojakojana sy ny henjana
Agenam-pandrefesana ferônika sôlôjia Ferro dia karazana firaka mifototra amin'ny FeSi misy barium sy kalsioma sasany, afaka mampihena be ny fihenan'ny hatsiaka, mamokatra kely sisa. Noho izany, Feroc silicon barium inoculant dia mandaitra kokoa noho ny inoculant izay tsy misy afa-tsy ny cal
Silicon Calcium Deoxidizer dia voaforon'ny singa silikônika, kalsioma ary vy, dia deoxidizer fitambarana mety, mpamorona desulfurization. Ampiasaina be izy io amin'ny vy avo lenta, vy ambany karbaona, famokarana vy tsy misy fangarony ary firaka base nickel, firaka titanium ary famokarana firaka manokana.
Magro silikonin'ny ferro Nodulizer dia mamerina manamboatra firavaka firavaka amin'ny tany, magnesium, silikika ary kalsioma tsy fahita firy. Ny nodulizer manezioma sianika ferro dia nodulizer tena tsara izay misy fiatraikany mahery amin'ny deoxidation sy desulfurization. Ferrosilicon, Ce + La mish metal na ferrosilicon ary magnesium an-tany tsy fahita firy